Ukuhlaziywa Kwesikhalazo se-Airbnb Ekuphawuleni - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Okushiwo abanye – isihloko sosizo
Imininingwane evamile – isihloko sosizo
Ukuhlaziywa Kwesikhalazo se-Airbnb Ekuphawuleni – isihloko sosizo
Ukuhlaziywa Kwesikhalazo se-Airbnb Ekuphawuleni
Njengoba umphakathi nomkhiqizo we-Airbnb uqhubeka ukhula, sihlala sizibophezele ekubuyekezeni le nqubomgomo uma kunesidingo ukuze siqinisekise ukuthi ukuphawula kubonisa okokuzithokozisa okwethembekile, okungokoqobo kwababungazi nezivakashi zethu.
Sikholelwa ukuthi isistimu yokuphawula elungile ihlonipha futhi ivikela umbiko othembekile womphakathi wethu. Ngenxa yalokho, ukukhishwa kwanoma ikuphi ukuphawula sikubheka ngeso elibukhali. Ungafunda Inqubomgomo Yokuphawula ye-Airbnb ephelele, kodwa ngamafuphi, lokhu kusho ukuthi ukuphawula kungakhishwa uma:
Ukuphawula kwephula Inqubomgomo Yokuphakathi ye-Airbnb,
Ukuphawula kubonisa ukuchema, noma
Ukuphawula akuhlobene nokokuzithokozisa kwe-Airbnb kwalowo obhalile
Umphakathi wethu uzuza kakhulu lapho ukuphawula kuveza umbono ongakhethi wokokuzithokozisa kwelungu. I-Airbnb ikhipha ukuphawula uma kubonisa ukukhetha okungafaneleki - ngokwesibonelo, ngenxa yokuthi ophawulayo uzama ukona idumela lalowo aphawula ngaye, unemibono ehlukile, noma uqhudelana nomuntu aphawula ngaye.
Ukufuna izinto ngenkani noma ukukhangisa
Noma imuphi umzamo wokusebenzisa ukuphawula noma izimpendulo zokuphawula ukuze kuphoqwe umuntu ukuba enze okuthile angabophekile ukukwenza kuwukusebenzisa kabi ukuphawula, futhi asikuvumeli.
Abantu abasebenzisa i-Airbnb abavunyelwe ukuhlobanisa ukuphawula okuhle nezithembiso zokunxeshezelwa noma ukusongela ngokuphawula okungekuhle uma lokho abakufisayo bengakutholi. Ukwephulwa kwalo mthetho kungaphumela ekuvinjelweni, ekumisweni okwesikhashana, noma ekuvalweni kwe-akhawunti yakho ye-Airbnb.
Le nqubomgomo ivimbela:
Izivakashi ezisongela ngokusebenzisa ukuphawula noma izilinganiso ukuze ziphoqe umbungazi ukuba azibuyisele imali, ukunxeshezelwa kakhudlwana, noma ukuphawula okuhle.
Ababungazi abacela isivakashi ukuba sishiye ukuphawula noma isilinganiso esihle, noma ukuba bashintshe ukuphawula ukuze basibuyisele ingxenye yemali noma ephelele, noma ukuphawula okufanayo. Ababungazi abakwazi nokunikeza indawo yokuhlala mahhala noma enesaphulelo ngoba isivakashi sishintsha ukuphawula osekubhaliwe.
Ababungazi noma izivakashi ezicela othile ukuba enze izenzo ezithile ezihlobene nokuphawula ukuze axazululelwe isikhalazo.
Le nqubomgomo ayivimbeli:
Isivakashi ukuba sithintane nombungazi ngenkinga ngaphambi kokushiya ukuphawula.
Umbungazi noma isivakashi esifuna ukubuyiselwa imali noma inkokhelo eyengeziwe nokushiya ukuphawula - lapho lokho kuphawula kungasetshenziselwa ukusongela ukuze sishintshe umphumela wesixazululo.
Umbungazi ukuba acele isivakashi ukuba sishiye ukuphawula okuhle okuthembekile noma isilinganiso esibonisa okokuzithokozisa okuhle.
Umbungazi noma isivakashi ukuba sishintshe ukuphawula phakathi nesikhathi esivumela ukushintsha.
Sizokukhipha ukuphawula uma kunezimpawu zokuthi ukubhukha kwenziwe ngenjongo yokunciphisa isilinganiso somuntu, noma lapho sinezinsolo zokuthi umuntu akazange ahlale nokuhlala.
Ukwamukela ukubhukha komgunyathi ukuze uthole ukuphawula okuhle, ukusebenzisa i-akhawunti yesibili ukuze uphawule ngawe noma ngendlu yakho, noma ukunikeza okuthile okubizayo ukuze uthole ukuphawula okuhle, akuvunyelwe. Ukwephulwa kwalo mthetho kungaphumela ekuvinjelweni, ekumisweni okwesikhashana, noma ekuvalweni kwe-akhawunti yakho ye-Airbnb.
Ukuphawula kwabanye abancintisana nawe
Ukuphawula okubhalwe abanye abancintisana nawe (ngokwesibonelo, amabhizinisi, izindlu, noma okokuzithokozisa okuncintisana nawe) ngenjongo yokwenza abanye bangazibhukhi lezo zindlu noma okokuzithokozisa noma ukuholela ibhizinisi kwezinye izindlu noma okokuzithokozisa, akuvunyelwe. Ukwephulwa kwalo mthetho kungaphumela ekuvinjelweni, ekumisweni okwesikhashana, noma ekuvalweni kwe-akhawunti yakho ye-Airbnb.
Ukwephulwa kwemithetho evimbela amaphathi
Singase sikukhiphe ukuphawula ezimweni ezithile lapho isivakashi singazange sihlangabezane nezimfuneko ezibhalwe kokuthi Inqubomgomo Yamaphathi Nemicimbi ekuhlaleni kwaso. Siyabethemba ababungazi bethu ukuthi bazothatha izinyathelo zokuzama ukuvala iphathi ngaphambi kokuba ibe yinkinga yezokuphepha noma isiphazamiso emphakathini ozungezile. Nokho, siyaqaphela ukuthi ukuvala iphathi kungaphumela ekuphawuleni okungekuhle ngokungafanele ngombungazi. Ukuze kukhuthazwe usizo nokunciphisa igalelo lokuphawula okungafanele, ukuphawula kwesivakashi kungase kukhishwe uma umbungazi enikeze isizathu esizwakalayo sokuthi kuye kwephulwa Inqubomgomo Yamaphathi Nemicimbi ngezinga eliphawulekayo. Nokho, lokhu kuphawula ngeke kukhishwe uma kunemininingwane ebalulekile ezoba usizo olukhulu esivakashini esikhathini esizayo.
Ukuphawula kunikeza amalungu omphakathi imininingwane nemibono ewasizayo ukuba enze izinqumo zokubhukha ezingcono. Ukuphawula kuwusizo kakhulu uma abaphawulayo bebhala ngokunembile okwenzekile kubo futhi benikeza imibono yabo ngokwethembeka.
Lapho ukuphawula kuqukethe imininingwane engahlobene nokokuzithokozisa njengombungazi noma njengesivakashi, noma kugxile kokuthile okungaphezu kwamandla omuntu okuphawulwa ngaye, ithimba lethu eliphawulayo lizohlola isisindo sokuphawula ngokubheka lokhu:
Ingabe ukuphawula kuyakhuluma ngokokuzithokozisa kwalowo ophawulayo futhi kuyawunikeza umbono wakhe?
Ingabe ukuphawula kuwusizo kwamanye amalungu omphakathi we-Airbnb? Ingabe kunikeza imininingwane ebalulekile ngombungazi noma isivakashi, indlu, noma okokuzithokozisa okungasiza abanye benze izinqumo zokubhukha ezisekelwe olwazini?
Uma i-Airbnb iphetha ngokuthi ukuphawula kuqukethe imininingwane engadingekile ngombungazi noma isivakashi, indlu, noma okokuzithokozisa, ukuphawula kungase kukhishwe. Ukuphawula okuqukethe imininingwane eminingi engadingekile kungase kukhishwe, kodwa kuphela lapho imininingwane ebalulekile kungenakulindeleka ukuba isetshenziselwe ekunqumeni ukubhukha kwamanye amalungu omphakathi.
Izibonelo zokubaluleka kokwephulwa nokungephulwa komthetho
Okungadingekile: "Ungabethembi abashayeli bamatekisi kuleli dolobha, indlela abahamba ngayo iyabheda!"
Okudingekayo: "Ungabethembi abashayeli bamatekisi kuleli dolobha, indlela abahamba ngayo iyabheda! Ngaphezu kwalokho, ngiye ngafika kule ndlu futhi ibimosheke ngokuphelele futhi umbungazi akazange angisize ezinkingeni zami."
Okungadingekile: "Lesi sivakashi sinamanga. Angikholwa ukuthi singudokotela wangempela."
Okudingekayo: "Isivakashi sifike sekwephuzile ukuze singene sangithethisa ngokungavuki ngokushesha ngisivulele. Siyachwensa futhi besishesha ukucasuka kukho konke ukubhukha. Ngeke ngiphinde ngiyimele indelelo yaso."
Ukuhlaziya ukubhukha okukhanseliwe
I-Airbnb ikuvumela ukuba uphoste ukuphawula kwanoma ikuphi ukubhukha okukhanselwe ngemva kuka-12:00 AM ngosuku lokungena. Senza lokhu ukuze siqongelele umbiko ngezikhathi ezibucayi kunazo zonke zokokuzithokozisa kokuvakasha, kungakhathaliseki ukuthi lokho kusho umbiko omayelana nokuxhumana, ukwephulwa kwemithetho yasendlini, izinkinga ngendlu ngesikhathi kungenwa, njll.
Uma unquma ukushiya ukuphawula ekubhukheni okukhanseliwe, sicela ukuthi ugcine umbiko wakho uhambelana nalokho obhekane nakho wena siqu. Ezimweni lapho i-Airbnb ingaqinisekisa ukuthi ukuphawula kushiywe ekubhukheni okukhanseliwe, futhi ukuphawula kuqukethe imininingwane engahlobene nomphakathi wethu (ngokwesibonelo, ukukhungatheka ngokukhanselwa kwendiza, njll.), ukuphawula kungase kukhishwe.
Kwezinye izimo, izivakashi zingase zikwazi ukukhetha ukuphosta ukuphawula ekubhukheni okuthile okukhanselwe ngemva kuka-12:00 AM ngosuku lokungena.
Uma unquma ukushiya ukuphawula ekubhukheni okukhanseliwe, sicela ugcine ukuphawula kwakho kuhambisana nalokho obhekane nakho, kungakhathaliseki ukuthi lokho kusho ukubika ngokuxhumana, ukwephulwa kwemithetho yendlu, izinkinga ngendlu ngesikhathi sokungena, njll. Khumbula ukuthi uma ungazange ungene, ungase ungabi nombiko oyisidingo ongawuthumela ngendawo, amasevisi, noma inani. Ukuphawula okushiyelwe ukubhukha okukhanseliwe kungase kukhishwe uma imininingwane enikeziwe ingesona isidingo emphakathini wethu (ngokwesibonelo, ukukhungathekiswa ukukhanselwa kwendiza, njll.) noma uma isivakashi sikhansele ukubhukha ngenxa yezimo ezingahlobene nokokuzithokozisa kwe-Airbnb.